Cali Khaliif Galayr oo sheegay inay Talyaaniga ku soo heshiiyeen inaysan la xiriirin hoggaamiye kooxeedyada
Wasiirka 1-aad ee Dowladda KMG ah, Cali Khaliif Galayr ayaa sheegay in dowladda Talyaaniga ay isku afgarteen inaysan mar dambe wax xiriir ah la yeelan hoggaamiye kooxeedyada. Cali Khaliif wuxuu ku nuuxnuuxsaday in safarkiisu uu ku soo idlaaday guul.
Waxa uu ka sheekeeyey dhammaan dadkii ay kulmeen oo uu ugu horreeyo Ra'iisal Wasaaraha dalka Talyaaniga Giuliano Amatto, madax ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Guddiyada Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka dalkaas. Wasiirka 1-aad, waxa uu qiray inaysan wax wada hadal ah kala yeelan dowladda Talyaaniga maxbuuska Soomaaliyeed, Xaashi Cumar Xasan oo loo haysto dilka weriyeyaal Talyaani ah oo lagu xukumay magaalada Rome.
"Waxaan is aragnay garyaqaankiisa Ducaale, waxayna ii sheegeen inay filayaan in rafcaan ay ka qaateen lagu sii daayo Xaashi Cumar" ayuu yiri. Mar aan wax ka weydiiyey booqashadii uu ku tagay xarunta Kaniisadda Vatican-ka ayaa Wasiirka 1-aad waxa uu farta ku fiiqay inay booqashadaasi ahayd mid ay ku doonayeen waxa uu ku tilmaamay afgarad siyaasadeed. "Baaderigu wuu maqnaa waxaanse is aragnay ku xigeenkiisa oo aan si fiican isku afgarannay" ayuu yiri Cali Khaliif oo sheegay in madaxda Vatican-ku ay kala hadleen isaga iyo wafdigiisa arrimo ay iyagu daneynayeen oo ay ka mid tahay kaniisaddii la dumiyey ee Muqdisho, ninkii baaderiga ahaa ee isna lagu dilay magaalada Muqdisho xilligii dowladdu jirtay iyo hay'adaha samafalka ee ay iyagu maalgeliyaan.
Dhinaca Imaaraadka Carabta, Wasiirka 1-aad, waxa uu tilmaamay in kulamo dhiirri geliyey uu la yeeshay madaxda dalka Imaaraadka Carabta iyo kuwa mandiqadda Dubai. "Wada hadallo aad aan ugu bognay ayaan yeelannay madaxda Imaaraadka" ayuu yiri. Waxa uu xaqiijiyey muddadii uu ku sugnaa magaalada Dubai inuu u furay ganacsatada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan Rug ganacsi oo ay leeyihiin. "Ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai waa kuwa keliya intaan ogahay (Soomaalida) ee leh urur ganacsi" ayuu yiri.
Inkastoo dhammaan safarradii uu dibadda ugu baxay uusan ku guuleysan inuu soo furo hal safaarad oo ka mid ah safaaradihii ay Soomaaliya horey u lahayd ayuu Wasiirka 1-aad qeexay in dhaqaale la'aan haysata awgeed ay u furi la' yihiin safaaradihii ay dibadda ku lahaayeen, waxaase uu caddeeyey in meelaha ugu horreeya ee safaaradaha ay ka furi doonaan ay tahay Wqooyiga Ameerika, Yurub iyo dalalka Carabta. "Safiirro wareega ayaannu geynaynaa meelahaas" ayuu yiri. Isagoo ka hadlayey safarka uu ku baxay Danjiraha cusub ee Dowladda KMG ah ay u magacowday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, Yuusuf Xasan Ibraahim (Yuusuf Dheeg) ayaa Cali Khaliif, waxa uu sheegay in danjiraha ay dirsadeen uu durba la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Siyuum Musfin, uuna gaarsiiyey dhambaal uu ka siday dowladdooda, waxaana uu xusay in dhowaan uu Danjiruhu dib u furi doono safaaradda isagoo wakiilna uga noqon doona Ururka OAU-da. Xiriirka ka dhexeeya Dowladda KMG ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo aan isku soo qaadnay, waxa uu Cali Khaliif muujiyey inuu ka xun yahay in Dowladda Itoobiya iyo iyagu ay wararka isu marinayaan saxaafadda.
"Annaku waxaan is leennahay Itoobiya waxaad la yeelanaysaan xiriir fiican" ayuu yiri. Arrimaha gudaha ee dalka; waxa uu carrabaabay inuusan la socon dagaalkii ka dhacay Balcad. "Dagaalkaasu wuxuu dhacay tobonkii cisho ee aan maqnaa" ayuu yiri Wasiirka 1-aad oo sheegay in dekedda iyo garoonka diyaaradaha ay u xiran yihiin qaab farsamo. "Cid hor taagan ma jirto" ayuu daba dhigay.
Dhinaca Somaliland iyo Puntland ayuu sheegay in gobolladaasi kaalmada uu siiyo adduunka ay ku helaan magaca Soomaaliya. "Magac la yiraahdo Somaliland adduunku ma aqoonsana ee wuxuu u aqoonsan yahay deegaannada nabaddu ka jirto ee Soomaaliya" ayuu yiri Cali Khaliif oo Maamulka Puntland sheegay inuu yahay ku meel gaar. Waxa uu carrabka ku adkeeyey inay jirto hal arrin oo aanay marnaba ka galaynin wax shuruud ah ama gorgortan ah, taas oo ah midnimada Soomaaliya. "Soomaali kalama maaranto, Somaliland-na kama maaranto Soomaaliya" ayuu yiri Wasiirka 1-aad oo sheegay in markii la aasaasayey Somaliland sannadkii 1991-kii aanay cidna maanka ku haynin in wax la yiraahdo dal Somaliland ah uu dhalanayo.
"Shirkii Burco aniga iyo Ismaaciilba (Ismaaciil Buubaa) waynu ka qayb galnay, mana jirin dad is lahaa Somaliland ayaa ka maarmaysa Soomaaliya" ayuu yiri. "Cigaal, cidda uu metelo wuu yaqaan, annana waan naqaan" ayuu yiri Cali Khaliif oo sheegay inay doonayaan inay wada hadal la yeeshaan Cigaal. "Wada hadalladaasi waxay ka dhacayaan Xamar ama Hargeysa" ayuu ku daray.